IHypernet: Cofa kwiMandla aNgokugunyazisiweyo eComputer okanye uthengise ngokwakho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 17, 2018 NgoLwesithathu, Agasti 15, 2018 Douglas Karr
Itekhnoloji yeBlockchain isesebusaneni, kodwa kuyonwabisa ukubona izinto ezintsha ezenzeka ngoku ngoku. IHypernet ngomnye wale mizekelo, ukwandisa ngokuzenzekelayo amandla ekhompyutha kuso nasiphi na isixhobo esikhoyo kwiwebhu. Ucinga ngamakhulu ezigidi ee-CPU ezihlala zingenzi nto iiyure-zisasebenzisa amandla athile, zisafuna ukugcinwa, kodwa zichitha imali.
Yintoni iZiko elizimeleyo lokuZimela (i-DAC)?
Umbutho ozimeleyo osebenza ngokuzimeleyo (i-DAC), ngumbutho oqhutywa yimithetho efakwe kwikhowudi njengeenkqubo zekhompyuter ezibizwa ngokuba ziiikontrakthi ezihlakaniphile.
Ukuyilwa kwehypernet okuyintloko ayisiyonto yabo ye-chain; Yimodeli yenkqubo ye-DAC engekhoyo. Le modeli yenza ukuba kube nakho ukuqhuba ukubalwa ngokuhambelana kuthungelwano olunamandla nolusasazwayo lwezixhobo, zonke ngendlela engaziwayo negcina imfihlo. IHypernet idibanisa izixhobo kwaye izisebenzise ukusombulula iingxaki zehlabathi lokwenyani.
IHypernet uququzelela izixhobo kunye nemisebenzi kwinethiwekhi ngokusebenzisa ishedyuli ye-blockchain. Ihambelana ngokuzenzekelayo neemfuno zomthengi kunye nababoneleli abafanelekileyo, iqinisekisa ukuba imisebenzi igqityiwe ngokufanelekileyo, kwaye inceda ukugcina ukhuseleko kunye nokuthembeka. I-DAC isebenzisa inkqubo yethokheni ukuqinisekisa ukuba izibonelelo zikhona njengoko kufuneka kubathengi bayo, kubandakanya:
Ukuma - Abathengi kunye nabathengisi kufuneka babeke isibambiso ukugqibezela imisebenzi yokubala. IiHyperTokens seso sibambiso. Umthengisi ubeka isibambiso kwizixhobo zabo ngelixa abathengi bebeka intlawulo yabo kwisivumelwano se-smart ngaphambili. Kwinethiwekhi enabalingisi abangaziwayo, isibambiso sizisa uxolo lwengqondo kubo bobabini abathengi kunye nabathengisi beekhompyuter.
Ubume -Idumela lomsebenzisi lonyuka ngokuba ngumboneleli othembekileyo noxanduva lokubala ikhomputha kunye nomthengi, kwaye olu dumo lungeniswe ngokusisigxina kwi-blockchain. Isidima somsebenzisi sonyusa amathuba okuthatha inxaxheba kwimisebenzi yekhompyuter.
imali yeloo lizwe IihyperTokens yimali yokuthengiselana eyenza ukuthengwa nokuthengiswa kwekhompyuter kunxibelelwano.
Ukufumaneka kweMigodi -Umntu ngamnye unokumba i-HyperTokens ngelixa elinde imisebenzi yekhompyuter, ngokufumaneka nje kwigumbi lokungenisa. Oku kukhuthaza abasebenzisi ukuba bajoyine inethiwekhi kwaye benze ukuba izixhobo zabo zibekhona. Ngelixa ukwindawo yokulinda, abasebenzisi banokucela umngeni kwezinye izixhobo ezingenzi nto ukuze babone ukuba zikwi-intanethi ngokwenene na. Ukuba bayasilela kumceli mngeni isibambiso sabo siqokelelwa ngumceli-mngeni. Inani leethokheni ezifumanekayo kwimigodi liyancipha ngokuhamba kwexesha, ke ukusayina izixhobo kwangoko kuzuza ezona thokheni.
Ulawulo oluMiselweyo / Ukuvota -Iindawo zithatha inxaxheba kumceli mngeni nakwimpendulo kwaye zikhuthazwa ekuncedeni ukugcina umgangatho wenethiwekhi, kunye nokukhupha abalinganiswa abangalunganga. I-node nganye ibethe ezinye iindawo kumceli mngeni / kwindlela yokuphendula ukumisela ukuba ngaba zivuliwe ngokwenene xa zisithi. Utshintsho olukhulu kuthungelwano lunokuvotelwa, ivoti yakho ilinganiswe linani leeHyperTokens ozibambayo.
IHypernet ngokuyimfuneko idale eyona supercomputer inkulu ngokusebenzisa amandla okubala ezixhobo ezifihlakeleyo. Ngokwemigaqo ye-layman, oko kuthetha ukuba nanini na izixhobo ezinjengeelaptops, ii-smartphones kunye neetafile zingasetyenziswa, iHypernet inokuwasebenzisa la mandla, ngenxa yoko iiwebhusayithi aziphazami ngenxa yokugcwala kwiseva. Ngaphezulu, kuba la mandla ahanjiswa asasazwayo, mancinci amathuba okuba nayiphi na idatha ethe tye, eqokelelweyo ngexesha lokuthengiselana nge-eCommerce inokuba sengozini.
tags: DACIQumrhu elizimeleyo lokuZimelaiikhompyuter ezisemthethweniikhompyutha
Iqhwa lichaza indlela abayitshintshe ngayo intengiso yabo ngeNtengiso esekwe kwiAkhawunti #CONEX